Uyiphelisa njani iAkhawunti yokuNxibelelana? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 12, 2021 0 IiCententarios 357
Uvile ngokuqinisekileyo Iakhawunti ye-LinkedIn inokumiswa, kodwa kude kube ngoku awazi ukuba ungayenza njani. Ngeso sizathu, kweli nqaku uza kufunda ngokweenkcukacha amanyathelo ekufuneka uwalandele ukumisa iakhawunti yakho nokuba ikwiwebhusayithi okanye kwiFowuni yeselfowuni.
Ngendlela efanayo, uya kuyazi ifayile ye- Izibonelelo zokuphumla kwaye ungacimi iakhawunti ye-LinkedIn, ngendlela yokuba, ukuba ngasizathu sithile ubufuna ukuyishenxisa, uya kufunda ukuba kutheni ukunqumama kuya kuhlala kuyeyona ndlela ilungileyo.
Amanyathelo okumisa iakhawunti ye-LinkedIn kwiwebhusayithi
Misa kancinci iakhawunti ye-LinkedIn kwiwebhusayithi Eli qonga liya kuba yenye yezona ndlela zilula apho. Kungenxa yokuba ukwenza njalo kuya kufuneka ulandele le miyalelo ilandelayo:
Ngena kwisikhangeli osisebenzisa kakhulu kwiphepha elisemthethweni le-LinkedIn.
Emva koko cofa kwindawo ethi "Ngena" oza kuyibona kwicandelo eliphezulu lasekunene kwesikrini.
Kuya kuvulwa iphepha elitsha kwaye kuya kufuneka ufake i-imeyile okanye inombolo yefowuni kunye negama lokugqitha.
Emva koko ukhethe u- "Ngena."
Xa uku-akhawunti yakho, phawula ukhetho "Ndi" oza kulibona kwimenyu ephezulu yesikrini.
Iinketho ezininzi ziya kuvela kwaye ucofa apho ithi "Useto kunye nemfihlo".
Kwakhona uza kubona iindlela ezininzi kwaye uya kuphawula leyo ithi "Lawula idatha yakho kunye nemfihlo".
Ngoku uye kwicandelo "Ezikhethwayo zeAkhawunti" ezifumaneka kwimenyu kwicala lasekhohlo lesikrini.
Izinketho ezininzi ziya kuvela kwaye kufuneka ukhethe enye ethi "Ulawulo lweAkhawunti".
Emva koko, cofa kwindawo ethi "Misa iakhawunti"
Okokugqibela, uya kubona umyalezo wokuqinisekisa kwaye kuya kufuneka ucofe ku "Kulungile" kwaye kunjalo.
Ngale ndlela, ekupheleni kwala manyathelo iakhawunti yakho iya kunqunyanyiswa kwaye uqaphele njani ukuba ungayenza ngokulula nangokukhawuleza.
Amanyathelo okumisa iakhawunti ye-LinkedIn kwi-mobile app
Ngoku ukuba unayo Inkqubo ye-LinkedIn yeselfowuni unokuma kwiakhawunti yakho ngokukhawuleza, kule meko kuya kufuneka wenze oku kulandelayo:
Vula iNkqubo yokuDibanisa.
Faka igama lakho lomsebenzisi iphasiwedi kunye nokumakisha "Faka".
Xa ungaphakathi, cofa ifoto yakho yeprofayile.
Kuya kuvela iindlela ezininzi kwaye ucofe ku "Lungisa".
Emva koko kufuneka uphawule apho ithi "Akhawunti".
Uya kubona iinketho ezininzi kwaye kufuneka ukhethe "Lawula iakhawunti".
Ngoku nqakraza kwi "Misa iakhawunti".
Okokugqibela, qinisekisa ukusebenza kwaye ugqibile.
Izibonelelo zokunqumama kwaye ungacimi i-akhawunti ye-LinkedIn
Ukuphelisa iakhawunti ye-LinkedIn endaweni yokususa kuvela kulukhetho oluhle kakhulu kwabo bafuna nje ukuba bangabikho okwexeshana. Ukongeza, ibanika ithuba lokuba bangalahli idatha abayilayishe kwiakhawunti yabo.
Ngendlela efanayo, ivumela ukuba baphinde bayisebenzise kwakhona nanini na xa befuna, enyanisweni, kwimeko yokuba bazisole ngokuba bame yenza iiyure ezingama-24 zisebenze emva kokuyekiswa ukusebenza.
1 Amanyathelo okumisa iakhawunti ye-LinkedIn kwiwebhusayithi
2 Amanyathelo okumisa iakhawunti ye-LinkedIn kwi-mobile app
3 Izibonelelo zokunqumama kwaye ungacimi i-akhawunti ye-LinkedIn
Uyifihla njani iprofayile yakho kwi-LinkedIn?